Dabaqa laminate jumlada ee midabada parquet -saaraha iyo qeybiye | Moyo
Cabbirka: 806X403mm, 1214x296mm
Dhumucdiis: 10mm 10.5mm 12mm
LDabaqa aminate (oo sidoo kale loogu yeero foornada alwaaxda sabaynaysa ee Maraykanka) waa alaab sagxad ah oo ka samaysan lakabyo badan oo isku jira oo la isku daray habka dahaarka. Dabaqa dahaadhka ahi wuxuu u ekeysiiyaa alwaax (ama mararka qaarkood dhagax) oo leh lakab codsi sawir leh oo ka hooseeya lakab ilaalin oo cad. Lakabka udub -dhexaadka ah ee gudaha ah ayaa badiyaa ka kooban walxaha melamine -ka iyo alaabta guddiga fiber -ka. Waxaa jira Heerka Yurub ee Lambarkiisu yahay EN 13329: 2000 oo tilmaamaya shuruudaha daboolidda sagxadda dhulka iyo hababka tijaabada.
Dabaqa dahaadhka ahi aad buu caan ugu noqday, laga yaabee in laga yaabo inay fududahay in la rakibo oo la dayactiro marka loo eego sagxadaha dhaqanka sida dabaqa adag.Waxa kale oo laga yaabaa inay leedahay faa'iidooyin qiima jaban oo u baahan xirfad yar si loo rakibo marka loo eego qalabka kale ee dhulka. Si macquul ah ayuu u raagayaa, nadaafad ahaan (dhowr nooc ayaa ku jira sunta bakteeriyada), waana sahlan tahay in la ilaaliyo.
Dabaqyada dahaarka leh ayaa si macquul ah ugu sahlan mulkiilaha DIY inuu rakibo. Dabaqa dahaarka ah waxaa loo baakadeeyay sida tiro ah carrabka iyo looxyada jeexjeexa, oo midba midka kale la riixi karo. Mararka qaarkood xabagta ayaa la siiyaa si loo fududeeyo rakibidda. Dabaqyada laminate-ka ee la rakibay ayaa sida caadiga ah "sabbayn" dabaqa hoose ee dusha sare ee xumbo/filim hoosaad, kaas oo bixiya guryaha qoyaanka- iyo cod-yaraynta. Meel yar (1-10 milimitir (0.039-0.394 in)) ayaa loo baahan yahay inta u dhaxaysa sagxadda iyo shay kasta oo aan dhaqaaqayn sida derbiyada, tani waxay u oggolaanaysaa sagxadda inay ballaarto iyadoo aan la hor istaagin. Boodhadhka hoose (looxyada goonida) waa la saari karaa ka dibna dib ayaa loo rakibi karaa ka dib marka sagxaddu dhammaato si dhammaystiran oo dhammaystiran, ama sagxadda sagxadda ayaa lagaga tagi karaa iyada oo sagxadda la dhex geliyay, ka dibna googoysyo yar yar oo la isku qurxiyo sida kabaha oo kale ama rubuca weyn Wax -ka -beddelidda dhulka waxaa lagu dhejin karaa sagxadaha salka hoose. Goynta lagu gooyay looxyada ayaa inta badan looga baahan yahay geesaha iyo agagaarka kabadhada iyo albaabada laga soo galo, laakiin rakibayaasha xirfadleyda ah ayaa sida caadiga ah adeegsada miinshaarrada albaabka hoostiisa si ay u gooyaan meel bannaan oo dherer u oggolaanaysa in sagxaddu ay ka hoos marto jambka albaabka & dahaarka .
Rakibaadda aan habboonayn waxay sababi kartaa kororka, kaas oo looxyada ku dheggan ay ka samaysan yihiin qaab V ah oo ka soo baxaya dhulka, ama daldaloollada, kuwaas oo laba loox oo isku dhow ay kala soocan yihiin.
Waxaa muhiim ah in laydhka la nadiifiyo, maadaama boodhka, wasakhda, iyo qurubyada ciiddu ay xoqmi karaan dusha wakhti ka dib meelaha meelaha baabuurta badan yihiin. Waxa kale oo muhiim ah in laminate-ku si fiican u qalalan yahay, maadaama fadhiista biyaha/qoyaanku ay sababi karaan looxyada inay bararaan, duntaan, iwm, in kasta oo noocyada qaar ay ku qalabaysan yihiin dahaarka biyaha u adkaysta. Biyaha daadanayaa dhib ma aha haddii si degdeg ah loo tirtiro, oo aan loo oggolaan inay fadhiistaan ​​muddo dheer.
Suumanka dhejiska ah ayaa inta badan la saaraa cagaha alaabta guryaha dabaqyada laminate si looga hortago xoqidda.
Waxaa laga yaabaa in sagxadaha dahaarka leh ee aan xabagta lahayn ay si tartiib tartiib ah u kala baxaan, oo ay ka dhex abuurmaan godad muuqda. Waxaa muhiim ah in looxada dib loo taabto iyadoo la adeegsanayo aaladda ku habboon maaddaama la arko dulduleelo si looga hortago in wasakhdu buuxiso meelaha bannaan, sidaas darteedna ay adkeyneyso in meel la dhigo.
Dabaqyada laminate -la'aanta ah ee tayada leh waxay adeegsadaan farsamooyin ku biirinta kuwaas oo looxyada isku wada haya iyada oo ay jirto xiisad joogto ah taas oo ka hortagaysa wasakhda inay gasho kala -goysyada oo aan u baahnayn in mar mar dib loo garaaco.
Hore: Dabaqa Ecomomic laminate EIR Taxanaha
Xiga: Dabaqa Laminate ee Jumlada iyo taxanaha caadiga ah